LUUQADAHA IRIS T-6A Texan II FSX & P3D - Rikoooo
downloads 26 731
Updated on 06 / 01 / 2019 : Waxaa lagu daray guddi 2D, laqabsashada loogu talagalay Prepar3D v4, nooca rakibaadda 10.5
Beechcraft T-6 Texas II waa diyaarad a turboprop hal-engined dhisay by Shirkadda Diyaaradaha Raytheon (hadda Hawker Beechcraft). Iyada oo ku saleysan Pilatus PC-9, ku-T 6 waxaa loo isticmaalaa by Air ee Force United States tababarka pilot aasaasiga ah iyo ka Navy Maraykanka u qaabilsan Hoose iyo Joint Naval Flight Sarkaalka Dhexe (NFO) iyo Ciidamada Cirka Sarkaalka Systems Dagaalamo (CSO) tababarka. Waxa uu bedelay Ciidamada Cirka ee T-37B Tweet waxaana la bedelay ee Navy ee T-34C Turbo horjoogaha. The T-6A sidoo kale loo isticmaalaa sida tababaraha aasaasiga ah by Air Force Royal Canadian (CT-156 Harvard II), oo Luftwaffe ee Germany, Air Force Giriigga, Air Force Israel (Efroni), iyo Air Force Ciraaq.
Tayada muuqaalka DXT3 si loo hagaajiyo heerarka xajmiga ee jawi faahfaahsan.
Roodhiga dusha sare ee gadaashooda oo si qumman u duulaya habeenkii.
Qol Virtual Interactive oo ay ku jiraan noocyo kala duwan oo walxaha interactive caadadii.
Muuqday sumadaha digay, kuraasta xoojinaya iyo daboolida qaadashada oo lagu daray liiska dheeraad ah ka pre-hoyga ah.
Custom Soundpack loogu talagalay by Christoffer Petersen ka marawaxadaha Sound Studios.
Nidaamyada jilitaanka naqshadeynta loogu talagalay oo ay ku jiraan Qalabka Qalabka Trim Aid.Xiidhinta duulimaadka duulimaadka ka imanaya qaab dhismeedka duulista duulista Rick Piper ayaa dhameystiran oo leh karti isugeyn labada FS9 iyo FSX.
Laba daydo dibadda daboolaya Texas II iyo II gobolka Texas ee NTA la shidaalka dibadda tanks.Authentic guddi 2D cusub VFR iyo gujisid daaqadaha, oo dhan la caadadii barnaamijkii aaladaha XML oo dhan.